mars 2020 · déliremadagascar
Socio-eco	 27 mars 2020 R Nirina
Fifehezana ny valanaretina COVID 19. Nitety ny biraom-panjakana toy ny teny amin’ny TPIC (Trésorerie Principale Intercommunale), ny “poste de la gendarmerie”, ny toeram-pitsaboana fototra (CSB) ary ireo biraom-pokontany rehetra eny Ivato, ny Ben’ny tanàna Penjy Randrianarisoa sy ny sekretera jeneralin’ny kaominina ny 26 martsa 2020. Continuer la lecture →
Ambatovy a remis, ce mercredi 25 mars 2020, un lot de matériels médicaux, à la Direction Régionale de la Santé Publique Atsinanana, à Toamasina. Continuer la lecture →
Socio-eco	 25 mars 2020 R Nirina
Miantso ny Prezidan’ny Repoblika hanao fanelanelanana amin’ny FAI (Fournisseur d’Accès Internet). Continuer la lecture →
Mitondra ny andraikiny ny JIRAMA amin’ny izao hamehana izao. Araka ny fanambarana nataon’ny Prezidàn’ny Repoblika, Rajoelina Andry omaly alina momba ny fandoavana ny faktioran’ny JIRAMA dia nanome fanazavana amin’ny fanatanterahana izany ny tomponandraikitry ity orinasam-panjakana ity. Continuer la lecture →
Socio-eco	 23 mars 2020 R Nirina
« Tokana ny fahavalontsika dia ny aretina COVID-19 » . Miantso ny tsirairay handray andraikitra, hiray hina ny Prezidàn’ny Repoblika teo aloha, Hery Rajaonarimampianina satria miatrika fahavalo tokana sady iombonana dia ny aretina coronavirus. Continuer la lecture →
Mandeha haingana tahaka ny TGV ny fivoaran’ny aretina COVID-19. Niampy sivy indray ny mitondra ny tsimok’aretina Coronavirus eto Madagasikara ary mpandeha fiaramanidina Air France AF 934 avy any Frantsa avokoa izy ireo ny 17 Martsa sy 19 Martsa 2020. Continuer la lecture →
FRÉQUENCE PLUS TV: Nametraka fitokisana tamin’ny Startimes
Manome lanja ny fanabeazana sy ny kolontsaina any amin’ny faritra. Tsikaritra fa manaraka ny fivoaran’ny teknolojia ny haino vaky jery eto Madagasikara. Continuer la lecture →
Sport	 19 mars 2020 R Nirina
ORANGE PRO LEAGUE : Hafindra toerana ny lalao tokony atao eny Vontovorona
Efa manakaiky ny fifaranan’ny « Orange Pro League ». Mikarakara « soirée Awards » ho fankasitrahana ireo mpiara-miombon’antoka sy ny mpiantsehatra mivantana amin’ny lalao fifaninana « Orange Pro League » ny « l’association des clubs de football élites de Madagascar» (CFEM). Continuer la lecture →
Sport	 17 mars 2020 R Nirina
DREAM TEAM SPORTING CLUB -BASKETBALL: Fanamby ny handrombahana ny tompondaka nasionaly amin’ny sokajy rehetra
Misokatra ho an’ireo te hampiroborobo ny fanatanjahantena fa indrindra ny taranja basketball. Fanambin’ny Dream Team Sporting Club (DTSC) ny handray anjara amin’ny lalao iadiana ny tompondaka nasionaly amin’ny sokajy rehetra mandritra ny taom-pilalaovana 2020 ho an’ny taranja basketball. Continuer la lecture →
Fetin’ny paska feno hafaliana. Herinandro vitsy lasa izay dia niverina ao amin’ny televiziona nomerika StarTimes ireo chaînes ankafizin’ny mpanjifa toy ny Fox, Fox life, National Geogrphic, National Geographic Wild, ESPN, ESPN 2. Continuer la lecture →